Xiinxala Haala Gaanfa Afrikaa : Oromo Democratic Front
Xiinxala kana keessatti haallan biyyootaa fi ummatoota Gaanfa Afrikaa walitti hidhan walhubachiisuudhaaf carraaqna. Akkaataan biyyootiin godinaa kanaa itti dhalatan kan walitti isaan hidhu ta’uu walhubachiifna. Dhibdeen biyya tokko keessatti dhalatu amala biyyoota hafanis tuttuquu akka qabu ilaalla. Hegereen sabootaa biyyoota godinaa kanaa addatti ilaalamuu akka hin danda’amne hubanna.
Akkaataa Biyyotni Gaanfa Afrikaa Itti Dhalatan
Yeroo kun ta’aa turetti Godinaan Gaanfa Afrikaa tarsimaawaa ta’uu isaa irraa humnoota Awropaatiinis guddaa kajeelamaa ture. Waan godinicha tarsimaawaa keessaa inni guddaan saaqamuu kanala Suezi (Suez cannal). Sana irraa eegalee hanga guyyaa har’aatti Garbi Diimaan tarsimaawaa ta’ee jiraata. Sababa kanaaf, humnoonni Awropaa sadii naannoo kanatti kolonii qabaachuudhaaf wal dorgomuu jalqabu. Isaanis: Brixaniyaa, Faransaa fi Xaliyaanii dha. Jarri kun hundi naannoo Gaanfa Afrikaa guutummaa dhuunfachuudhaaf kajeelu turan. Kanaaf akka karaa isaaniif saaquuf naannoo adda addaa dhuunfachuu jalqaban. Xaliyaaniin, akkuma humni Masir Eriterea lakkiseen, bakka isaa buutee naannoo Massawaa dhuunfatte. Dabalees, Banadiris (naannoo Mogadishoo) dhuunfatte. Dachee bakka kanneen lamaan gidduu jiru guutummaa dhuunfachuudhaafis akeekkatte. Faransaanis Djibouti har’aa qabachuudhaan achi irraa hanga Atlantikitti dhuunfachuudhaaf akeekkatte.
Lammaffaa, tumsa mormitootaa kana irra mootummootni waliif tumsanii mormitoota dararuu dha. Imaammata isa lammaffaa kana ammatti akka gaariitti hojii irra oolchaa kan jiru mootummaa Wayyaanee ti. Kan Eritrea irraa kan hafee mootummoota hafan hunda wajjin hariiroo gaarii tolfattee jirti. Hariiroo diplomasy fi nagummaa qofa osoo hin taane kan ekonomys tolfachaa jirti. Kunis, mormitoota biyyoota ollaa keessatti qubsuma dhorkachuudhaafi.